Amabali EBhayibhile: Ukuthinjelwa EBhabhiloni Kuse Ekwakhiweni Ngokutsha Kweendonga ZeYerusalem - IWebhsayithi Esemthethweni YamaNgqina KaYehova
Ngoxa esekuthinjweni eBhabhiloni, amaSirayeli afumana izilingo ezininzi zokholo lwawo. UShadraki, uMeshaki noAbhednego baphoselwa ezikweni elivutha umlilo, kodwa uThixo wabakhupha bephilile. Kamva, emva kokuba iBhabhiloni yoyiswa ngamaMedi namaPersi, uDaniyeli waphoselwa emhadini weengonyama, kodwa uThixo wamkhusela ngokuvala imilomo yeengonyama.
Ekugqibeleni, ukumkani wamaPersi uKoreshi wawakhulula amaSirayeli. Abuyela kwilizwe lawo kwiminyaka engama-70 emva kokuthinjelwa eBhabhiloni. Enye yezinto zokuqala awazenzayo ekubuyeleni eYerusalem kukuqalisa ukwakha itempile kaYehova. Phofu ke, ngokukhawuleza iintshaba zawunqumamisa umsebenzi wawo. Ngoko kwakumalunga nama-22 eminyaka emva kokubuyela eYerusalem ekwathi ekugqibeleni ayigqibezela itempile.
Kwakhona, sifunda ngohambo lukaEzra lokubuyela eYerusalem eye kuhombisa itempile. Kwakumalunga nama-47 eminyaka emva kokugqitywa kwetempile. Kwathi ke, kwi-13 leminyaka emva kohambo lukaEzra, uNehemiya wancedisa ukwakha ngokutsha iindonga ezidilikileyo zeYerusalem. Icandelo LESIHLANU ligubungela i-152 leminyaka yembali ukuza kuthi ga kweli xesha.